सुव्यवस्थित परमेश्वरको राज्य – Bachan Tv
सुव्यवस्थित परमेश्वरको राज्य
BACHAN TV January 29, 2019
संसारको सामु सभ्य र शिष्टताको साक्षीतुल्याउन सुव्यवस्थाले भूमिका खेल्छ
थोमस बोगटी, १५ माघ २०७५
बाइबलले हामीलाई महत्वपूर्ण कुरा बताएको छ । शुरुमा सबै कुरा असलथियो तर समयको अन्तरालमा धेरै परिवर्तनहरू आए । ती परिवर्तनले गर्दाखेरी परमेश्वरले तयार पार्नुभएकाअसल कुराहरूमा खराबील्याउने कार्य हुनथाल्यो । त्यो कार्य परमेश्वरको शत्रु शैतानले गर्न थाल्यो । शैतानले गोलमालल्याउनचाह्यो र परमेश्वरको सुव्यवस्था विरुद्ध जान रुचायो । बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि शैतानले परमेश्वरको स्थानलिनचाहन्थ्यो । यसो गर्दा शैतान एक व्यवस्थितढङ्गले चालिरहेको थिएन । शैतानलेगोलमाल,भ्रम र कुइच्छा रुचाइरहेको थियो । सुव्यवस्थितमार्ग रुचाउने मानिसको परिणाम शैतानको जस्तै हुनेछ किनभने परमेश्वरको मार्गभन्दा फरक गोलमालको मार्गमा चलेबापतअव्यवस्थित भइन्छ । अव्यवस्था र गोलमाललाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ ।
हितोपदेश ४ः२५–२७ ले भन्छ,Œतेरो आँखाले तेरो अगि सीधा हेरोस् । तेरो अगिल्तिर सोभैm एक टक लाएर हेरोस् । तैंले पाइलाचाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर् । तीमार्गहरू मात्रै अप्नाजुननिश्चित छन् । दाहिने र देबे्र नलाग् । सबै दुष्ट कुराबाट आफ्नाखुट्टाअलग् राख ।”
सुव्यवस्थितमार्गरू निश्चित हुन्छन् । तीमार्गहरू नैतिकताले भरिएको हुन्छ । यहाँ दुष्ट कुराको लागि स्थानहुदैन । यीमार्गहरू सोझा हुन्छन् ।
परमेश्वरले शुरुमा स्वर्ग र पृथ्वीबनाउनुभयो । पृथ्वीआकारविनाको र शून्यथियो । अथाह समुद्रमाथिअन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मापानीमाथि परिभ्रमण गर्दैहुनुहुन्थ्यो । उत्पत्ति १ः१–२ ।
अव्यवस्थितमार्गमा अन्धकार हुन्छ । आकारविनाको र शून्य हुन्छ ।केहीपनि देखिदैन किनभने त्यहाँ ज्योतिहुँदैन । यद्यपि परमेश्वरले अभैm पनि नियन्त्रण गरिरहनुहुन्छ । जसरी अन्धकार गर्भभित्र भ्रूण हुन्छ तर आमाबाबु नियन्त्रणमा छन् । तिनीहरूको त्यस्कोवास्ता गर्छन् ।
उत्पत्तीको सृष्टिको वृतान्तमा परमेश्वरले सुव्यवस्थित रूपमा सृष्टि गरिरहनुभयो । क्रमिक रूपमाउहाँले कार्य गरिरहनुभयो । ती सबै असलथिए । छ दिनसम्मउहाँले सुव्यवस्थितढङ्गले सुव्यवस्थित सृष्टिलाई रच्नुभयो । तीएकदमअसलथिए । उहाँले आकारविनाको र शून्यपृथ्वीलाई सुव्यवस्थित गराउनुभयो र त्यसलाई शुन्यहोइन तर त्यसलाई हरेक असलथोक, प्रणाली, पद्धतिले भरिभराउ गर्नुभयो । पृथ्वी अब चल्न सक्थ्यो । यसको लागि परमेश्वरले सुव्यवस्थितमार्गहरू तयार पार्नुभयो । ज्योति, हावा, पानी, बनस्पती, जनावर, जमीन र मानवजातिहरू बनाउनुभयो । यी सबैको श्रोतहरू पनिबनाउनुभयो र त्यसको लागिनिश्चितजीवनचक्रहरू तोकिदिनुभयो र त्यसरी नै तिनीहरूले कार्यसञ्चालन गर्ने थिए । अझसम्मपनि यसरी नै कार्यसञ्चालनभएको छ । सातौ दिनमा परमेश्वरले विश्रामलिनुभयो ।सुव्यवस्था एक सुहाउदा क्रमबद्धताको शैलीपनिहो । यसको लागि समयको निर्धारण गरिन्छ । तीनिर्धारित समयको अन्तरालमाकार्य सञ्चालन हुन्छ ।
तर पाप संसारमा आएदेखि उता यसरी सुव्यवस्थित सृष्टिमा पनि दुष्टा छिरिगयो र समयको अन्तरालमागोलमालमच्चिनथाल्यो । विभिन्नजीवनचक्रहरूमाअनियमिततातथा घडबडी देखिनथाल्यो किनभने मानिसले अव्यवस्थितमार्ग तथा परमेश्वरको मार्ग विरुद्ध पाइलाचाल्यो ।
कुनै पनि कुराको सुव्यवस्था नै त्यसको साँचो पहिचानहो । परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिलाई पहिचानदिनुभएको छ र यसले नै तिनीहरू एक अर्कामा भिन्न तुल्याउँछ यद्यपितिनीहरू स्वनिर्भर हुन्छन् । स्वनिर्भर हुँदा समेत उनी सुव्यस्थिततवरले हुनलाई परमेश्वरले तयार पार्नुभयो । घाम झुल्कन्छ, पृथ्वीकाबनस्पतीलाई भोजन उपलब्ध गराउँछ र प्राणीलाई तृप्त गराउँछ । घाम झुल्किन छोड्यो भने भोली देखि पृथ्वीमा अस्तव्यस्थता, गोलमाल, अन्धकार र अनिश्चता छाउन थाल्छ । घामको पहिचान छ, त्यसको आफ्नौ मार्ग र जीवनचक्रहरू छन्, कार्यसञ्चालन छ, पद्धति छ र तत्व छ । त्यसरी नै अरू सबै कुराको पहिचान छ ।
दुःखको कुरा आज संसारमा अव्यवस्थाको कारण पहिचानभ्रम पैmलिरहेको छ । नदीनालालाई ढल बनाइएको छ, समलिङ्गी बढ्दैछन्, अविवाहित यौन दुराचारले समाजलाई तोड्दैछ, अरू जातलाई निम्न ठानिन्छ, मानिसलाई भन्दापशूलाई बढी प्रेम गरिन्छ, प्रकृतिको पूजा गरिन्छ, पशूसँग सम्बन्ध गाँसिन्छ, प्रकृतिसँगविवाह गरिन्छ । यस्ता धेरै अव्यवस्थाले कुमार्गतिर डोर्याएको छ जसको परिणाम दुःखदायी हुन्छ । फलफलाउन सक्दैन । पुर्नउत्पादन छैन । तीहेर्नमा असल छैनन् अर्थात उत्पत्तीमा परमेश्वरले हेर्नुहुँदाअसलभए जस्तो असलहुन छोडेका छन् । तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् । जब पहिचान भ्रष्ट हुन्छ तब मार्ग स्वतह भ्रष्ट हुन्छ ।
१ कोरिन्थी १४ः३३,४० ले संयुक्तरूपयसो भन्छ,Œकिनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ । तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ ।”
गोलमाल परमेश्वरबाट आउदैन । उहाँशान्ति रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ । सबै कुरा सुव्यवस्थित र शिष्ट भएको उहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ र हामीले माथि नै उत्पत्तीको सृष्टको वृतान्तबाट हेरिसक्यौँ कि उहाँकति सुव्यवस्थित हुनुहुन्छ । उहाँ समयलाई निर्धाण गरी कति बेलाकार्य गर्ने र आराम गर्ने भनेर तोक्नुहुुन्छ । शबाथदिनलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ । व्यवस्थाको पुस्तक हेर्दा परमेश्वरको सुव्यवस्था झल्किन्छ र सायद संसारमा परमेश्वरको वचन र व्यवस्थालागु गरे सबै राज्यहरू सुव्यवस्थित हुनसक्छन् । नेपाल सुव्यवस्थितनहुनुको पछाडि यसको कानुन नैतिकता, शान्ति, सद्भाव र प्रेमामाहोइन तर बहुसंख्यक जनमानसको पक्षमाआधारित छ जो गोलमाल, पक्षपात र स्वार्थमय हक रुचाउछन् ।
चर्च सेवा, सुसमाचार प्रचार, सेवकाइ र संघसंस्थाहरूले शिष्टतापूर्वक कार्य गरी परमेश्वरको सुव्यवस्थित राज्यलाई प्रतिनिधि गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ । अन्यभाषा, अगमवाणी र अरूआत्मिक वरदानगोलमालमानभइशान्ति, नियन्त्रण र शिष्टतापूर्वक होस् भन्ने पावलको मनसाय सठीक छ किनभने यसले बाहिरका मानिसहरूलाई ख्रीष्टियानहरूकतिको सुव्यवस्थित र सभ्य रहेछन् भनी प्रस्तुत गर्नेछ । तर गोलमालमच्चिएको छ भने पावलले भन्छन् कि बाहिरकाहरूले ख्रीष्टियानहरूको दिमाग उडेको ठान्नेछन् (सन्दर्भ १ कोरिन्थी १४अध्यायमाउल्लेख गरिएका सुव्यवस्थितआराधना र अन्यभाषातथा अगमवाणीको प्रयोग) । इस्राएलीहरूलाई विश्वभर अरूजतिभन्दा फरक र सभ्यतुल्याउन परमेश्वरले वचन र व्यवस्थाउपलब्ध गराउनुभयो भनेर बाइबलको पुरानो करारमा स्पष्ट पारिएको छ । यसमाथिथपजानकारी प्राप्त गर्न मोशाको प्रस्थान, गन्ती, लेवी र व्यवस्थाको पुस्तकअध्ययन गर्नुहोला । तपाईंलाई सभ्यतुल्याउनयसले निकै सहयोग गर्नेछ । वास्तवमा परमेश्वरलाई चिनेपछि तपार्ईं कति सभ्यभइसक्नुभएको छ भनेर अहिलेसम्म चालपाउनुभइसकेको छ । त्यसैले सुव्यवस्थितहौँ अनि सभ्यभएको साक्षीदियौँ । बाहिरको मानिसहरू ख्रीष्टियानहरू सभ्य, सुव्यवस्थित र शिष्ट भएको देख्न लालायित छन् ।
सुव्यवस्थित, शान्तिपूर्ण र शिष्ट बन्न कठीन हुनसक्छ किनभने गोलमाल पापबाट आउँछ । गोलमालपापको परिणाम हो । व्यवस्था २८ः२०, २८, ५३–५७ मा परमेश्वरको आज्ञा उल्लंघन र उहाँलाई त्यागे बापतगोलमालमच्चिने चेतावनीदिइएको छ । यसमाहाम्रो काममाश्राप, गोलमाल र हप्कीआउने जस्तो गम्भीर विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी बौलाहपन, अन्धोपन र हृदयको खलबलीपरमेश्वरको विरुद्ध गइपाप गर्नेहरूको होश उड्ने कुरा बताइएको छ । के आज संसारलाई त्यहीभइरहेको छैन र ? अरे महोदय !त्यहीदलदले पापको श्राप, गोलमाल र अन्धोपनबाट जोगाउन येशू आउनुभएको होइन र ?ताकिहामी सुव्यवस्थित, शिष्ट, शान्तिपूर्ण, नैतिकवानबन्ने अनिनिश्चितमार्ग र उद्देश्य पछ्याउन सकौँ ?
कुरा के हो भने सबैजनासहजै सुव्यवस्थितबन्ननसकिने स्पष्ट छ । तर यहाँ सुव्यवस्थितहुनको लागि एउटा रहश्य प्रकट हुनबाँकी छ । हामीले उत्पत्ती १ मा पवित्रआत्माअन्धकार पृथ्वीको पानीमाथि परिभ्रमण गरिरहेको देख्यौँ । यद्यपिहाम्रो जीवनअन्धकार, अन्धोप, गोलमालले भरिएको छ भने पनिपवित्रआत्माअभैm नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । उहाँले हाम्रो आकारहीन र शून्यअन्धकारमय जीवनलाई आकार र ज्योतिदिएर शून्यताहोइन तर अर्थपूर्ण बनाउन चाहनुहुन्छ । परमेश्वरबिनाहाम्रो जीवनशून्य, व्यर्थ र अँध्यारो हुन्छ तर येशू ज्योति हुनुहुन्छ र हामीलाई आकार दिनतयार हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरले हाम्रो गोलमालजीवनशैलीलाई ताडना दिएर सहीमार्गमाचल्ने तुल्याएर सुव्यवस्थित बनाउनुहुन्छ । २ शमूएल ६ः६–९, १ इतिहास १३ः९–१० मा विना परमेश्वरको अगुवाइखोजीलापरवाहीसाथ सन्दुक ल्याउँदाउज्जाहमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्कियो र तिनीतत्काल मरे । त्यसैगरी उज्जियाह राजाले पुजाहरीको कार्य गर्न खोज्दा कुष्ठरोग लाग्यो र तिनीलज्जस्थापूर्वक राजकीय सिंहासनबाट बहिस्कार गरिए । परमेरश्वरले गोलमालमाचल्नेहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ ताकितिनीहरू सुव्यवस्थितहुन सकून् । तर कति समय धेरै मानिसलार्ई त्यस्तो ताडनाको मौका प्रदान गरिएको छैन किनभने बाइबलअनुसार तिनीहरू परमेश्वरको सन्तानहुनचाहेनन् ।
हिब्रू १२ः१–१२ मा परमेश्वरले उहाँको सन्तानलाई ताडना दिनुहुन्छ र सहीमार्ग हिँड्ने तुल्याउन हुन्छ भनिएको छ । यो पहिला सुखदहुँदैन किनभने मानिसलाई सुव्यवस्थित, नैतिक, शान्तिपूर्ण र शिष्ट हुन समय लाग्छ । धार्मिकताको फलत्यतिबेला मात्रफल्न थाल्छ जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई पूरा नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ । केवल परमेश्वरबाट मात्र सुव्यवस्थितहुने शक्ति आउँछ । व्यर्थ जीवनलाई उहाँले अर्थमय र बहुमूल्य तुल्याउनुहुन्छ । हाम्रो चालचलन र जीवनशैली नैतिक, निश्चत, धार्मिक हुनउहाँको सुव्यवस्थितमार्गमा चल्नुपर्छ र यसमाउहाँले समयको अन्तरालमा एक एक गरी हिँड्न सिकाउनुुहुन्छ तर ताडना सहितताकिहामीले ठेस नखाऔँ ।जीवनमा परिवर्तन आउदा धेरै कष्ट हुन्छ । गोलमालबाट शान्तिको पाइला पछ्याउदा कष्ट हुन्छ किनभने हाम्रो लत, खराब विचार, स्वार्थ इत्यादिलाई त्याग्न संघर्ष हुन्छ यद्यपि परमेश्वरको ताडना र शक्तिले त्यसमाथिविजयपाउन सकिन्छ ।
तपाईंको गोलमाल, अन्धकार, आकारविहिन र शून्यजीवनमापनि परमेश्वर परिभ्रमण गरी नियन्त्रण गरिरहनुहुन्छ र यदितपाईंले उहाँलाई पुकारेर अनुमतिदिनुभयो भने उहाँले तपाईंको जीवनलाई शान्तमय, आकारको संरचना, ज्योति, अर्थपूर्ण, नैतिक, निश्चित र धार्मिकताले भरिपूर्ण तुल्याई सुव्यवस्थित, शिष्ट र सभ्यबनाउनुहुनेछ ।
पापको थन्को कसरी लगाउने ?
विना प्रमाण ख्रिष्टियन जगतलाई आरोप लगाउन पाइदैन
2 thoughts on “सुव्यवस्थित परमेश्वरको राज्य”
The truth about the Internet is that so many individuals are trying to make
their living from it. I do this commonplace and experienced success for many
The truth about the Internet is that so many individuals are trying to make their living
from it. I do this commonplace and experienced success for many